Musmeah Yeshua Synagogue Yangon - Yangon Thu Michelle
နီးနီးနားနားနဲ့ အမှတ်တမဲ့ ကျော်သွားမိတဲ့နေရာတွေ ရန်ကုန်မှာ အများကြီးပါ။ အဲ့ဒီထဲကမှ ၂၆လမ်း၊ မဟာဗန္ဒုလလမ်း နဲ့ ကုန်သည်လမ်းကြားက ဂျုးလူမျိုးတွေရဲ့ မတ်စ်မီးယား ရေရှူအာ ဂျုးဘုရားကျောင်း (Musmeah Yeshua Synagogue Yangon) ကို ဒီအပတ် သွားခဲ့တယ်။ သောကြာနေ့ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ရက်တွေ မနက် ၁ဝနာရီကနေ နေ့လယ် ၂နာရီထိဖွင့်တယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဘာသာကြီးလေးမျိုးအပြင် တခြားဘာသာဝင်တွေလည်းရှိတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ ဂျုးလူမျိုး ဂျုးဘာသာဝင်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ အရင်က သိတော့ သိသလိုလိုရှိတယ်။ သေချာသိလားဆိုတော့ မသိပြန်ဘူး။ အခုတော့ ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ ….။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂျုးလူမျိုးတွေ စတင်ဝင်ရောက် ၁၉ရာစု အစောပိုင်းကတည်းကပဲ။ ကုန်သည် အရောင်းအဝယ် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဂျုးလူမျိုးတွေက နေရာအနှံ့မှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရင်း အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဂျုးလူမျိုးတွေအကြောင်း နိုင်ငံတိုင်းရဲ့သမိုင်းမှာ ပါဝင်လာတယ်။ လူသိများတဲ့အကြောင်းက ဂျာမန်နာဇီခေါင်းဆောင် ဟစ်တလာရဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုထဲမှာ ပါတဲ့ ဂျုးလူမျိုးအကြောင်းပါ။ ဘာသာရေးအရကြည့်ရင်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာသမိုင်းမှာလည်း ဂျုးတွေပါတာပဲ။ သိပ္ပံနယ်ပယ်မှာဆိုလည်း ထင်ရှားတဲ့ အိုင်းစတိုင်း ကလဲ ဂျုးလူမျိုးပဲ။ ဂျုးလူမျိုးတွေက ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီး လူသိများတယ်။ (တခြားအသေးစိတ် သိချင်ရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ ရှာဖတ်ကြည့်နော်)
ဂျုးလူမျိုးတွေက၂ဝရာစု အစောပိုင်းတုန်းကဆို ရန်ကုန်နဲ့ ပုသိမ်မှာ မြို့တော်ဝန်ဖြစ်တဲ့အထိ အရေးပါအရာရောက်ခဲ့တယ်။ သိမ်ဖြူလမ်းဆို အရင်က Judah Ezekiel Street ဆိုပြီး ဂျုးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကို အစွဲပြုပေးခဲ့တာ။
နောက်ပြီး မတ်စ်မီးယား ရေရှူအာ ဂျုးဘုရားကျောင်း က ဂျုးဘာသာဝင်တွေ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ တိုရာကျမ်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၁၂၆စုံ ထိရှိခဲ့တဲ့ ဘုရားကျောင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဘာလို့ အများကြီးရှိတာကို စကားထဲ ထည့်ပြောရလဲဆိုတော့ ဒီတိုရာကျမ်းတွေကို ဆိတ်သားရေပေါ်မှာ ဟီဘရူးဘာသာကို လက်နဲ့ရေးရတာ။ အမှားမခံဘူး။ ကွန်ပြူတာလို လက်နှိပ်စက်လို undo လုပ်လို့မရမင်ဖျက်ဆေးနဲ့ဖျက်ပြီးပြန်ရေးလိုမရဘူး။ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့အလိပ်လိုက်ကိုစာလုံးသေးသေးလေးနဲ့အကြာကြီးရေးရတယ်။ဆိတ်သားရေအများကြီးကုန်တယ်။အရှည်လိုက်ဖြစ်အောင်ချုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ရေးမယ်ဆိုရင်ပိုက်ဆံအများကြီးပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုစျေးကြီးတာကိုတစ်အိမ်တစ်ကျမ်းပိုင်လောက်တဲ့အထိရေးနိုင်လောက်အောင်ချမ်းသာခဲ့တယ်ဆိုတော့ထင်သာမြင်သာရှိပါတယ်။
တခြားသိချင်တာရှိသေးရင် Internet မှာရှာလို့ရပါတယ်။ ပြောတာကိုဖတ်ပြီး ပြီးသွားတာထက် ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် ရှာရင်း သိသွားတာ ပိုမှတ်မိပြီး ပိုပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ တယောက်ယောက်က (ဥပမာ – မီရှဲ) ဖောရှောပြောနေရင် ကိုယ်ကသိထားတော့ ဆင်ခြင်နိုင်တာပေါ့ ….
Jew has been migrated in myanmar since late 1880s. Their wealth and influences had been expanded and this synagogue Yangon shown reflection of its. let’s see what is inside … Address:26th Street, Between Mahar Bandoola Street and Marchant Street. Opening time: 10am to 2pm everyday except Friday.
You can find more related information from Wikipedia as well about Jewish temple. This is the only one temple in the whole country. It’s amazing and interesting.